Warmly Welcome: သင်္ကြန်ရေဖြင့် အေးချမ်းကြပါစေ
ကိုဝင်းဇော်ကြီးကိုရေလောင်းချင်တယ်၊ အိုးမဲလဲ မှတ်လောက် သားလောက်အောင် သုတ်လိုက်ချင်တယ်။ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး စာရေးတာ ဖတ်လို့ကောင်းလို့ ...
သင်္ကြန်မှာ အပြတ်ကဲဖို့ ရေခဲတွေ ခဲထားတယ်.. ရေခဲရေနဲ့ လဲလောင်း၊ ဂျင်ထဲလည်း ရောပေါ့ ..
မင်းတို့ မန်းတလေးမှာ အလှပြကားတွေ မရှိတော့ ဘူးလား.. ကလေးတွေ ပြစရာ သင်္ကြန်အလှပြ ကားမရှိလို့ ငါလဲ မိန်းမမယူတော့တော့ဘူး (ဘာမှလဲ မဆိုင်ဘူး)
ဗြဟ္မာဦးခေါင်းဆိုတာ ဒီကစတာကိုး ..
ပြည့်စုံအောင် ပြန်ရှာဖတ်လိုက်အုန်းမယ် ..
ကိုဝင်းဇော်ကြီး သင်္ကြန်မှာ အသားကုန် ကဲနိုင်ပါစေ ။
တောင်ကြီးသင်္ကြန်မှာ အေးချမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေ အကိုကြီးရေ....။
ပျော်ရွှင်တဲ့ သင်္ကြန်ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ။
အမှတ်တရများစွာနဲ့ ညီငယ် ။
ပျော်ရွှင်ဘွယ်ကောင်းတဲ့ သင်္ကြန်ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်
နိုင်ပါစေ မောင်ဝင်းဇော်ရေ...း)
ရိုးရာမပျက် မြန်မာ့သင်္ကြန်လေး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ ရေလောင်း ရေပက်တဲ့ အလေ့အကျင့် လေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ (ခေါင်းလောင်းခံရရင် စိတ်ဆိုးတယ်၊ ရိုင်းတာပေါ့နော်)
မဏ္ဍာပ်ရှေ့မှာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ကနေချင် ပေမယ့် .. ဒီနှစ်တော့ နည်းနည်းလျော့ထား အုန်း မလားလို့။ ရာသီဥတုက ပြင်းလွန်းတော့ တစ်ခုခု ဖြစ်မှာ ကြောက်ရသေးတယ်။
hAPPY nEW yEAR ဖြစ်ပါစေ
အိမ်နဲ့ အိမ်သားတွေကို လွမ်းတယ်
သင်္ကြန်မှာကဲဖို့ အဖော်စုတုန်း အကိုရေ့.
ဒီနှစ်တော့ အင်းထဲသွားမယ် စိတ်ကူးတယ်.
သူ ဘယ်လို ရေစိုရွဲနေမလဲ...
ရွှေဖလားနဲ့ သပြေခက်နဲ့ ရေအပက်ခံချင်တယ်..
ရေပြွတ်နဲ့ အပက်ခံရမှာကြောက်လို့ ကားနဲ့ မလည်တော့ဘူး။ အိမ်ကနေပဲ ကစားမယ်။ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းပေါ်ရှိမယ် ။
ငွေဖလားနဲ့ သင်္ကြန်ဆင်နွှဲမယ် သပြေခက်နဲ့ အဟိ
ရှေးက ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေက ခေတ်ရေစီးကြောင်းရဲ့ တိုက်စားမှုကြောင့် အသွင်ကွဲ လာတာမဟုတ်ဘူး။
ရေမလာလို့ ရေမလာလို့ .......
ရေလာလောင်းပါတယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ၊ တောင်ကြီးမှာ သင်္ကြန်ကျမယ်ပေါ့လေ၊ ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ၊ လာချင်လိုက်တာ။ ကျမသာ ရွာငံ မှာရောက်နေရင် ကိုဝင်းဇော်ကို တွေရမှာတော့၊ အခုတော့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ အိမ်လည်ဖိတ်ပါတယ်၊ တကြိမ်ကြိမ်တော့ ဆုံရမှာပါ တို့မောင်နှမတွေ
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စေဖို့ တောင်းဆုချွေတယ်။
သင်္ကြန်မှာ အသားကုန် ကဲနိုင်ပါစေ ဘော်ဒါကြီး
ဗွမ်း..၀ုန်း..ဂွမ်း ( ဒါကတော့ ခွက်ပြုတ်ကျသွားသံပါ၊)
နေဦး မပြေးနဲ့ အိုးမဲသုတ်မယ်။
"ခွက်စုတ်လေးနဲ့ ပက်တာလောက်တော့ ၇ယ်တာပေါ့ရယ်တာပေါ့ "
အဟတ်..ဦးချစ်ဖေကြီး.သင်္ကြန်တွင်း ကဲတော့မယ်ပေါ့လေ။ ဘယ်ရမလဲ ခေါင်းကနေ.အရင်ဆုံးလောင်းလိုက်ပြီနော်။
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်ပါစေဗျာ။။
ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ ဆုတောင်းလေး ပြည့်ဝပါစေဖို့ ထပ်မံ တောင်းဆုပြုလိုက်ပါတယ်..။
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်သံချပ်တွေကို လွမ်းသွားတယ်...အမြင်မတော်တာတွေကို သံချပ်တိုင်ပြီး ဆိုတာအော်တာတွေ နားထောင်ရတာ ရီလည်း ရီရ..သဘောလည်း ကျခဲ့ရတာလေ.. ခေတ်ပြောင်းလို့ သံချပ်နေရာကို rap စာသားတွေ အစားထိုးလာတာမျိုးထက်.. လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေးကို တနည်းတဖုံဖြည့်လိုက်တာလို့ပဲ မြင်မိပါတယ် ကိုဝင်းဇော်ရေ..။
သူများတွေပြောသွားတာနဲ့ ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး အားလုံးကိုပြည့်စုံသွားတာပဲ အဟိ အင်းကောင်းကောင်းကဲနိုင်ပါစေဗျာ
အတက်နေ့ အိမ်မှာ အလှူရှိတယ်
အော် ဗြဟ္မာ့ဦးခေါင်း .. ဖြတ်ခံရပြီးတာတောင် နတ်သမီးလက်နဲ့ မ , နေရတယ် ကံကောင်းလေစွ .
နောက်အလျင်းသင့်ရင်၊ ပြည့်စုံအောင် ထပ်ဖော်ပြ စေချင်တယ်။
သိချင်တာလေး ... တစ်ခုရှိလို့ 
သိရင် .. ပြောပြပေးပါလားဗျာ
သင်္ကြန်မိုးကားထဲက ... ကဗျာစာသားလေး ..
မှတ်မိတဲ့လူရှိရင် ... သိပါရစေ ...
ဖက်ဆွတ်ရေတိုး .. သင်္ကြန်မိုး ဆိုပြီးအဆုံးသတ်ထားတယ်လေ ...
မန်းသားကြီး... ဟတ်ပီးနယူးရီးယားဗျာ...။ :D
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..
စီပုံးက ကျနော် ၀င်မရဘူးဗျာ။ ဘာလို့လဲမသိဘူး။ ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ ...
ကြံတိုင်းအောင်လို့ ဆောင်တိုင်းမြောက်ပါစေ ...
ကို ဝင်းဇော်ရေ .. နှစ်သစ်မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ ... လိုအင်ဆန္ဒတွေလည်း အရာအားလုံး ပြည့်စုံပါစေ .. အောင်မြင်မှုတွေလည်း ဆထက်တစ်ပိုး ရရှိပါစေ ဗျာ ။။
ပျော်ရွှင်ပါစေဗျို့ .........း)
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်လေးပါ အကိုရေ
ကိုဝင်းဇော် ရေ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါဗျို့ 
တန်ခူး မည်မှတ် ဖက်ဆွတ်ရေတိုး သင်္ကြန်မိုး...
နှစ်သစ်ကူးလို့ ချစ်ဦင်္းကို ရှာဖွေး)
ရေလာလောင်းတယ် တစ်စက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ရတယ်ဟုတ် ။
နှစ်သစ်မှာ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အကုန် အကုန် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေဖို့
ကိုဝင်းဇော်လည်း နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ၊ လိုအပ်ဆန္ဒတွေလည်း ပြည့်ဝ ပါစေလို့ ပြောချင်ပါတယ်
အပေါ်မှာ ပြောသွားကြတာ ဘာမှ ပြောစရာ မကျန်တော့လို့ မင်္ဂလာ။ရှိသော နှစ်သစ်ပါလို့ပဲ နှုတ်ဆက်တယ်ဗျုို့